I-emerald enkulu kunazo zonke emhlabeni - Isibuyekezo esihle se-2021 - Ividiyo Entsha
I-emerald enkulu kunazo zonke emhlabeni
I-emerald enkulu kunazo zonke emhlabeni yi-Inkalamu, i-Lion Emerald kodwa i-Bahia Emerald ithathwa njenge-emerald enkulu kunazo zonke ezake zatholakala.
Kuya ngokuthi ngabe sibheka ibhulokhi elenziwe ngamatshe amaningana noma i-crystal eyodwa.
I-emerald enkulu kunazo zonke emhlabeni eyake yatholakala
I-emerald enkulu kunazo zonke emhlabeni yiBahia Emerald: 1,700,000 carats
I-Bahia Emerald iqukethe enye ye-shard eyodwa enkulu kunazo zonke eyake yatholakala. Itshe, elinesisindo esilinganiselwa ku-341 kg noma 1,700,000 carats, livela eBahia, eBrazil futhi lingamakristalu afakwe edwaleni elisingethe. Isinde ngokulambisa izikhukhula ngesikhathi seSiphepho uKatrina ngo-2005 ngesikhathi kugcinwa isitolo esiseNew Orleans.
Kwakunombango wobunikazi ngemuva kokuthi kubikwe ukuthi kwebiwe ngoSepthemba 2008 endaweni evikelekile eSouth El Monte eLos Angeles County, eCalifornia. Igugu belitholakele futhi icala nobunikazi kuxazululiwe. Itshe lalinganiselwa ezigidini ezingama- $ 400, kepha inani langempela alicaci.
Kusanda kutholwa ama-carats amakhulu ayi-180,000
Kutholakale itshe eliyigugu elikhulu lama-carats ali-180,000 muva nje ngabavukuzi ngaphakathi kweMayini yaseCarnaiba eBrazil. Lesi sibonelo esimangalisayo se-emerald simi ngamamitha angu-4.3 ubude futhi sinenani elilinganiselwa ezigidini ezingama- $ 309.
Itshe latholakala endaweni yaseBrazil eyaziwa ngokukhiqiza amatshe ayigugu, iMayini yaseCarnaiba esifundeni sasePernambuco. Iqoqo lamatshe ayigugu litholwe ngamamitha angama-200 ukujula emayini futhi belidinga abantu abayishumi ngesonto eligcwele ukukhipha futhi baphakamisele phezulu leli qoqo.
Lesi sibonelo sakhiwe ngama-carats angama-180,000 esewonke ama-emerald beryls. Ngokuya ngosayizi, ukutholakala kanye nenani lamakristalu, ochwepheshe balinganisela ukuthi sonke isifanekiso singabiza u- $ 309 wezigidi.
I-crystal emerald enkulu kunazo zonke emhlabeni yi-Inkalamu, i-Lion Emerald: 5,655 carats
Kutholakale imayini enkulu kunayo yonke emhlabeni, enesisindo esingu-1.1kg futhi ebiza imali elinganiselwa ku- £ 2m, emayini yaseZambia. Igugu lama-carats angu-5,655 latholwa yinkampani yezimayini iGemfields eKagem, okuyimayini enkulu kunazo zonke emerald emhlabeni, ngo-Okthoba 2, 2020.
Ibizwe nge-Inkalamu, okusho ukuthi ibhubesi ngolimi lwesiBemba lwasendaweni. UGemfields uthe kuphela amatshe ayivelakancane futhi ayigugu kunawo wonke anikezwa amagama. Igama lesiBemba lakhethwa ukuhlonipha umsebenzi wokongiwa kwenkampani yezimayini.
I-Emerald Unguentarium: ama-carats angu-2,860 XNUMX
I-Emerald Unguentarium, i-2,860 ct (20.18 oz) vase emerald eqoshwe ngo-1641, ikhonjiswa eMnyangweni Wezezimali Wasebukhosini, eVienna, e-Austria.
I-Sacred Emerald Buddha: ama-2,620 carats
Kuqoshwe emthini we-3,600 ct waseZambia u-emerald ngo-2006, isithombe esingcwele se-Sacred Emerald Buddha sinesisindo se-2,620 ct.
Ukumelwa kukaSiddhartha Gautama kungenye yamatshe ayigugu amakhulu aqoshiwe emhlabeni. Waboniswa endaweni ejwayelekile ye-mudra ngokwesiko ehlotshaniswa nesiyalo kumalungu omndeni wakhe (isangha noma ubupristi) ukuba bayeke ukuxabana bodwa.
Njengoba inesisindo esingu-2,620 carats, inombala oluhlaza okotshani omuhle (ngenxa yokungcola kwe-chromium ne-vanadium), kimi umbala omuhle kakhulu we-emerald, futhi ayinayo inclusions.
Akuvamile kakhulu ukuthi isimo esinjalo sekhwalithi esibi sibe nenye ikusasa kunokusikwa kumagugu aqoshiwe, ngakho-ke isinqumo esathathwa yinkampani ukusidweba sasinesibindi. Yayiqoshwe futhi ipholishwa ngumbazi omkhulu we-jade okuthiwa u-Aung Nyein, odabuka eBurma kodwa ohlala eThailand.
IGuinness Emerald Crystal: amakarati ayi-1,759
IGuinness Emerald Crystal etholwe ezimayini zeCoscuez emerald ingenye yamakristalu e-emerald amakhulu kunawo wonke emhlabeni, futhi iyikristalu emerald enkulu kunazo zonke eqoqweni lekristalu eliseBanco Nacionale de la Republica eBotota, inhlokodolobha EColombia.
Umsuka wegama elithi Guinness awaziwa, kepha ubude, obungu-1759-carat, ukhristalu oluhlaza okotshani ngokungangabazeki wawunazo zonke iziqinisekiso zokufaka incwadi yeGuinness yamarekhodi omhlaba njengegugu elikhulu kakhulu eliyigugu emhlabeni okungenani iminyaka ethile kuze yeqiwa ngamanye amakristalu emvelo emerald amakhulu.
Ama-carats angu-1,686.3 ama-LKA nama-1,438 carats uStephenson emeralds
Imvelo yetulo lokwenza okuthile okumisa inhliziyo ngobuhle bayo. Ama-carats angu-1,686.3 i-LKA kanye ne-1,438 carats uStephenson emeralds atholakala ngo-1984 nango-1969.
Ngokulandelana ngaphakathi kwendawo ye-Hiddenite kuphakathi kwamatshe amangalisa kakhulu emhlabeni, kepha izazi ze-gemologists ezihlonishwayo ziwazisa lawa matshe amakhulu amakhulu, emvelo ekristalu elimangazayo abalwa phakathi kwama-emeralds amakhulu kunawo wonke ake atholakala emhlabeni: I-LKA neStephenson.
IMim Emerald: 1,390 carats
I-prismatic crystal emikhulu, enezinhlangothi eziyisithupha enamakhadi angu-1,390 angasikiwe ngombala oluhlaza ojulile omuhle. Kusobala futhi kufaka okufakiwe okumbalwa kokungenhla okungu-2/3, futhi kuyakhanya engxenyeni engezansi. Izindlu eMim Museum, eBeirut, eLebanon.
UDuke waseDevonshire Emerald: 1,383.93 carats
IDuke yaseDevonshire Emerald ingenye yamatshe ayigugu amakhulu kunawo wonke futhi adume kakhulu kunawo wonke emhlabeni angasikiwe, anesisindo samakharathi angu-1,383.93. Isuka emayini eMuzo, eColombia, yanikezwa noma yathengiswa ngu-Emperor Pedro I waseBrazil kuWilliam Cavendish, uMbusi wesithupha waseDevonshire ngo-6. Yakhonjiswa eGreat Exhibition eLondon ngo-1831, futhi muva nje e-Natural. Umlando Museum ngo-1851
I-Isabella Emerald: 964 carats
I-Isabella Emerald, itshe elisikiwe lama-carats angama-964, liphethwe yi-Archaeological Discovery Ventures, LLC.
U-Isabella Emerald uthola igama lakhe eNdlovukazi u-Isabella wasePortugal, indlovukazi engumfazi weNkosi uCharles V (1516 kuya ku-1556), uMbusi Ongcwele waseRoma, iNkosi yaseSpain, no-Archduke wase-Austria, abazuza njengefa umbuso omkhulu owawunqamula iYurophu yonke, usuka eSpain kanye neNetherlands kuya e-Austria kanye noMbuso waseNaples, kanye nezindawo zaphesheya kwezilwandle zaseSpain America.
INdlovukazi u-Isabella yahalela i-crystal futhi yafisa ukuyiphatha, ngemuva kokuzwa ama-akhawunti akhazimulayo etshe livela ku-Hernan Cortez, encwadini eyayibhalelwe ivela eMexico. Igugu elaziwa njenge- “Emerald of Judgement” eliyimfihlakalo lanikezwa uCortez, nguMontezuma II, iNkosi Yombuso Wama-Aztec, ngesikhathi uCortez engena edolobheni laseTenochtitlan namasosha akhe ngoNovemba 8, 1519. UHernan Cortez waqamba lelitshe eliyigugu ukuhlonipha iNdlovukazi u-Isabella, indlovukazi engumlingani kaCharles V, uMbusi Ongcwele WaseRoma kanye neNkosi yaseSpain.
IGachalá Emerald: ama-carats angama-858
IGachalá Emerald, enye yama-emeralds abaluleke kakhulu futhi adumile emhlabeni, yatholakala ngonyaka we-1967, emayini ebizwa ngeVega de San Juan, etholakala eGachala, idolobha laseColombia, elisendaweni eyi-142 km ukusuka eBogota. IGachalá Chibcha isho ukuthi “indawo yeGacha.” Kulezi zinsuku i-crystal ise-United States, lapho yanikelwa khona eSmithsonian Institution ngabathengisi bezimpahla baseNew York City, uHarry Winston.
IPatricia Emerald: ama-carats angama-632
I-Patricia yisibonelo esikhulu futhi esinemibala emihle. Kuma-carats angama-632, i-dihexagonal, noma izinhlangothi eziyishumi nambili, i-crystal ibhekwa njengomunye wama-emeralds amakhulu emhlabeni. Kutholakala eColombia ngo-1920, yaqanjwa ngegama lendodakazi yomnikazi wezimayini.
Amaphutha kule kristalu ajwayelekile kepha ayekethisa ukuqina kwegugu elinzima. Lesi sibonelo singenye yama-emeralds ambalwa kakhulu agcinwe engasikiwe. Namuhla, iColombia isewumthombo omkhulu emhlabeni wama-emeralds.
IMogul Mughal Emerald: 217.80 carats
IMogul Mughal Emerald ingenye yama-emeralds amakhulu kunawo wonke aziwayo. Indlu yendali uChristie uyichaze njenge:
I-emerald enqunyiwe esaziwa ngokuthi yi-The Mogul Mughal enesisindo sama-carats angama-217.80, okubhalwe phansi okuqoshwe ngokuncenga kweShi'a embhalweni omuhle we-naskh, wangomhla ka-1107 AH, okuphambene nalokho kuqoshwe yonke indawo ngomhlobiso we-foliate, i-rosette emaphakathi ezungezwe izimbali ezinkulu ze-poppy, ngomugqa wezimbali ezintathu ezincane ze-poppy noma yiluphi uhlangothi, imiphetho ebunjiwe eqoshwe ngokuqhekeka kwephethini yokuhlobisa nokuhlobisa i-herringbone, uhlangothi ngalunye lwezinhlangothi lubhoboze okunamathiselwe, 5.2 * 4.0 * 4.0 cm.
Imayini yasekuqaleni eColombia, yayithengiswa eNdiya, lapho amatshe ayefiswa kakhulu ngababusi boMbuso WakwaMughal. IMogul Mughal ihlukile phakathi kwamakristalu kaMughal ngokubhala usuku - 1107 AH (1695-1696 AD) - okungaphakathi kokubusa kuka-Aurangzeb, umbusi wesithupha. Kodwa-ke, abaphathi bakaMughal babengamaSunni, kanti umbhalo, iSalawat eyi-heterodox enikezelwe kuHassan ibn Ali noHusayn ibn Ali owaziwa nangokuthi uNad e Ali, nguShi'a, okwenza kube nokwenzeka ukuthi kwakungeyona eye-Aurangzeb, kodwa kwakungeyeyodwa izikhulu zakhe noma izikhulu.
Ithengiswe ngomhlaka 27 Septhemba 2001 ngabakwaChristie ngo- £ 1,543,750, kufaka phakathi imali eyikhokhelwa umthengi. Kusukela ngomhlaka-17 Disemba 2008, yayiseMnyuziyamu Wezobuciko BamaSulumane, eDoha, eQatar.
ICarolina Emperor: ama-carats angama-64
ICarolina Emperor engu-64.82 carat ibeka amagquma eNC ebalazweni! Le North America Emerald edumile kwathiwa iphefumulelwe ucezu lobucwebe obufanayo okwakunguCatherine the Great.
Indlovukazi yayiphethe i-emerald yaseColombia enezinhlangothi eziyisithupha enamadayimane azungeze i-emerald ngebhroki elithengiswe endalini kaChristie ngemali engaphezu kwezigidi eziyi- $ 1.65. ICarolina Emperor, eyatholakala endaweni yaseHiddenite, NC, yathengwa ngonyaka odlule futhi manje isanda kunikelwa eNyakatho Carolina Museum of Natural Sciences eRaleigh, NC.
Ingxenye enkulu kakhulu yakho konke lokhu ukuthi umuntu osizakele ucele ukuthi angaziwa. Umbukiso wasemnyuziyamu kuthiwa unamakristalu amathathu angasikiwe. Amatshe amakhulu kunawo wonke anesisindo sama-carats ayi-1,225 ngumbala oluhlaza okwesibhakabhaka oyifunayo ongafaniswa namatshe ayigugu kaMuzo afunwa kakhulu.
I-Emerald yaseSaint Louis: 51.60 carats
I-emerald yaseSaint-Louis ehlobise umqhele waMakhosi aseFrance ivela ezimayini zase-Austria kanye nasemeraldi yasendulo eminingi yaseYurophu. Lezi zimayini zakhiqiza kwaze kwaba ngekhulu le-19, cishe kwaze kwatholakala amadiphozi e-Urals ngo-1830.
IChalk Emerald: 37.82 carats
Ababusi basebukhosini baseBaroda State, izwe eliyinkosana eNdiya, bake baba nelitshe. Kwakuwumgogodla womgexo we-emerald nedayimane owawugqokwa nguMaharani Saheba, owawudlulisela endodaneni yakhe, uMaharajah Cooch Behar.
Ngekhulu lama-20, leli gem labuyiselwa emuva kusisindo salo sokuqala sama-carats angama-38.40 (7.680 g) futhi lafakwa eringini elenziwe nguHarry Winston, Inc., lapho lizungezwe khona ngamadayimane angamakhilomitha angamashumi ayisithupha, acishe abe ngu-15 carats.
Iringi yanikelwa nguMnu noNkk. O. Roy Chalk eSmithsonian Natural History Museum ngo-1972 futhi iyingxenye ye- owakwaSmithsonian'Iqoqo lamaGugu kaZwelonke nokuqoqwa kwamaminerali.
Izinqola ezingama-7,052 ezingaketshuliwe ezivela eColombia, eziphethwe ngasese futhi ezithathwa njengezingenakulinganiswa.
Amatshe angama-1,965 amatshe angasikiwe aseRussia, akhonjiswa eNational History Museum yaseLos Angeles County.
I-1,861.90-ct carats engagundiwe futhi engagagulwanga negama eliyigugu evela eHiddenite, NC, ephethwe ngasese. Kutholakale ngo-2003, lokhu okwamanje kuyi-emerald enkulu kunazo zonke eyatholakala eNyakatho Melika.
Amakristalu amakhulu amahlanu angenamagama avela eMuzo, eColombia, agcinwe egumbini leBank of the Republic of Colombia, anesisindo esisuka ku-220 carats kuya ku-1,796 carats.
UFred Leighton uthengise itshe likaMughal eliqoshwe ngamarati angama-430 ngezigidi zamaRandi.
iqoqo le-al-Sabah elivela e-Kuwait lifaka amatshe amaningi amahle, kufaka phakathi ama-carats crystal angama-398 ngendlela eyi-hexagonal kanye ne-235 carats crystal bead.
Inkomishi ye-crystal, yegolide ne-koqweqwe lwe-Mughal yekhulu le-17 cm eyathengiswa kwaChristie ngo- £ 7 million ngo-1.79.
Ama-carats ayi-161.20 aqoshwe itshe likaMughal alanda u- $ 1.09 million kwaChristie ngo-1999.
I-Teodora: ama-carats angama-57,500 XNUMX
Idwala eliluhlaza elingamakhilogremu ayi-11.5 labizwa njenge-emerald enkulu kunazo zonke emhlabeni futhi labizwa ngokuthi iTeodora, igama elisuselwa esiGrekini futhi lisho “isipho esivela kunkulunkulu.”
Itshe eliyigugu, noma kunjalo, lingahle lingabi yitshe elingu- $ 1-million-plus plus umnikazi walo okuthiwa u-Regan Reaney uliphakamisile njenge.
UMnu Reaney waboshwa ngoJanuwari 2012 eKelowna maphakathi ne-BC, ngesikhathi iRoyal Canadian Mounted Police imbamba. UMnu Reaney usolwa ngamacala amaningi okukhwabanisa e-Ontario, kusho i-RCMP esitatimendeni esifushane, kanti Amaphoyisa aseHamilton abenezincwadi ezivelele zokuboshwa kwakhe.
UMnu Reaney wayengaziwa phambilini emaphoyiseni aseKelowna, kepha akazange azizwe enesifiso sokugcina ephansi. Wayenalo igugu eliyigugu elilingana nekhabe elizolithengisa, phela.
Eqinisweni, kwakuyi-beryl yangempela, kodwa yayidayayiwe.
I-emerald enkulu kunazo zonke emhlabeni: FAQ
Ibiza malini ngobukhulu emhlabeni?
Itshe eliyigugu elikhulu kunawo wonke emhlabeni elake latholakala latholwa ku-shard elilodwa, i-Bahia Emerald inesisindo esingaba yizigidi ezingama-1.7, noma ama-752 lbs. Kutholakale esifundeni saseBahia empumalanga yeBrazil. Itshe elikhulu, okwamanje elihlala egumbini lokuhlala eLos Angeles, lingabiza cishe amaRandi ayizigidi ezingama-925.
Ubani ophethe i-emerald enkulu kunazo zonke emhlabeni?
Kutholakale i-crystal enkulu kunazo zonke emhlabeni, enesisindo esingu-1.1 Kg nenani elilinganiselwa ku- £ 2m, emayini eZambia. Igugu lama-carats angu-5,655 latholwa yinkampani yezimayini iGemfields eKagem, okuyimayini enkulu kunazo zonke emerald emhlabeni, ngo-Okthoba 2, 2020.
Okuningi imininingwane ye-gemological futhi ama-emeralds athengiswayo esitolo sethu
Le entry safakwa ngo Izindaba futhi umake I-emerald enkulu kakhulu, I-emerald enkulu emhlabeni, I-emerald enkulu kakhulu, i-emerald enkulu kunazo zonke emhlabeni, Emerald emikhulu kakhulu emhlabeni.